Google My Business: Hagaha Dutchtown ee helitaanka liistada • DutchtownSTL.org
Google My Business: Hagaha Dutchtown ee Liistada
Ganacsiga Google waxay ka caawisaa ganacsiyada inay ku taxan yihiin Google isla markaana ay xakameeyaan waxa ay macaamiishaadu arki karaan. Tilmaamahan, waxaan kugula socon doonnaa habka loo dejiyo oo loo hubiyo inaad wajigaaga ugu wanaagsan horey u soo martay. Iyo haa, waa bilaash!
Marka aad rabto inaad la xiriirto macaamiisha gudaha Dutchtown iyo wixii ka dambeeya, waxaad u baahan tahay in lagugu arko Google. Dadka badankood maalmahan waxay aadaan Google wax walba, gaar ahaan markay raadinayaan dukaanno, adeegyo, ama meel ay wax ka cunaan. Macluumaadka saxda ah ee aad bixin karto, sida ugu wanaagsan ee Google ayaa dadka ugu toosin karta ganacsigaaga.
DutchtownSTL waxay u heellan tahay inay ka caawiso ganacsiyada yaryar ee Dutchtown inay guuleystaan. Tilmaamahani waa iskaashi u dhexeeya laba ka mid ah Guddiyada Dutchtown: Gudida dallacaada iyo gudida dhaqaalaha. Wixii macluumaad dheeraad ah iyo inaad ku biirto mid ka mid ah gudiyadayada, booqo dutchtownstl.org/committees.
Si aad uhesho ilaha ganacsi ee yar yar ee Dutchtown, booqo dutchtownstl.org/business.
Tilmaamaha Fiidiyowga Ganacsi ee Google Google
Qofka deggan Dutchtown iyo milkiilaha ganacsiga Janessa West ayaa kugu kaxayn doonta booqasho fiidiyow ah oo lagu diiwaangelinayo meheraddaada Google My Business. Waxay u sameysaa liis iyada ah Adeega Nootaayooyinka Mobaylka ee St. Louis, oo ku tusaysa dhammaan tallaabooyinka lagu dejinayo Google. Fiidiyowgu wuxuu leeyahay talooyin iyo tusaalooyin nooc kasta oo ganacsi ah, laakiin si gaar ah ayuu qiimo u leeyahay haddii aad ka shaqeyso ganacsi adeeg oo gurigaaga ah ama ganacsi guurguura oo u adeega dhul ballaaran oo ka tirsan gobolka St. Louis.
Tallaabo Tallaabo Google My Business Walkthrough
Haddii fiidiyowyadu aysan ahayn waxaaga, hoosta waxaan ku soo bandhigi doonaa tillaabo tallaabo tallaabo ah oo lagu dejinayo astaantaada Google My Business. Tilmaamahan wuxuu diiradda saari doonaa dejinta astaamaha meheradda meheradda ah sida makhaayad ama dukaan, laakiin markale, waxaa jira soo-jeedinno badan oo khuseeya nooc kasta oo ganacsi ah. Raac hoosta!
Si aad u bilowdo, tag google.com/business oo guji Maaree Hada. Waxaa lagaa codsan doonaa inaad gasho koontadaada Google hadaadan horey uqornayn. Hadaadan horey u lahayn akoon Google ah (yacni Gmail), halkan guji si aad uqorto.
Soo hel oo kala saar Ganacsigaaga
Waxaa jira fursad wanaagsan oo ah in meheraddaadu ay horey uga sii socon karto Google. Xitaa adigoon u sheegin, Google wax badan buu ka ogyahay adiga iyo ganacsigaaga. Ku qor magacaaga ganacsiga oo arag haddii wax soo kordhayaan. Haddii aad isku aragto liiska, taasi macnaheedu waa Google waxay horeyba u soo aruurisay xoogaa macluumaad ah oo ku saabsan ganacsigaaga iyada oo loo marayo degellada kale, ku darsiga isticmaalaha, ama ilo kale. Hadda waa fursaddaadii aad kuheli laheyd macluumaadkaas oo aad u hubiso inay sax tahay oo la cusbooneysiiyey.
Haddii aadan ku helin naftaada tallaabada kore, waxaad u baahan doontaa inaad u sheegto Google cidda aad tahay. Horusocodkan, waxaan fureynaa dukaan yar oo sahlanaasho oo la yiraahdo South Side Snack Shop. Gali magacaaga ganacsi oo guji Next.
Marka xigta, waxaa lagaa codsan doonaa inaad qayb uga dhigto ganacsigaaga. Waxaa jira fursado badan. Ku bilow qoritaanka nooca aad u maleynaysid inuu ku habboon yahay meheraddaada oo Google ayaa bilaabi doonta inay soo jeediso. Kaliya waxaad kuheli doontaa inaad hal xulasho halkan ka sameyso, markaa hubi inay tahay midka saxda ah. Markaad xulashadaada samayso, guji Next si aad u sii wadato.
Ganacsigaaga Khariidadaha Google
Google ayaa ku weydiin doonta haddii aad rabto inaad ku darto goob muuqaal ahaaneed oo meheraddaada ah. Haddii aad ka shaqeysid dukaan leben iyo hoobiye ah sida makhaayad ama dukaanka tafaariiqda, ama haddii aad qof ahaan ugu bixiso adeegyo goob cayiman, horay u sii soco oo guji haa. Tani waxay fursad kuu siin doontaa inaad gasho macluumaadka cinwaankaaga, saacadaha, iyo wixii la mid ah.
Haddii aad ganacsi ka wado gurigaaga ama aad si toos ah ugu gaarsiiso adeegyada dadka jooga gurigooda ama meheraddooda, waxaad dooran kartaa maya.
Tillaabooyinka soo socda ee soo socda, waxaan u qaadaneynaa in meheraddaadu ay leedahay meel muuqata.
Horay u soco oo gal goobta muuqaalka ah ee ganacsigaaga. Bakhaarkayaga khafiifka ah ee fudud, South Side Snack Shop, ayaa si habboon loogu dhex heli doonaa gudaha Xarunta Hal-abuurka Xaafadda si aan ugu adeegno gaajadeenna mutadawiciin iyo xubnaha guddiga.
Markaad bilawdid inaad qorto cinwaankaaga, Google ayaa soo saari doonta soojeedinno kaa caawinaysa inaad hubiso in cinwaankaagu ansax yahay oo si habboon uga soo muuqan doono Khariidadaha Google. Ku muujinta Khariidadaha Google waxay si gaar ah muhiim ugu tahay ganacsiyada raadinaya taraafikada cagaha. Markuu qof raadinayo “dukaanno iibi agtayda” ama “makhaayadaha ku yaal Dutchtown,” meheraddaadu waxaa laga yaabaa inay ka muuqato khariidad u dhow natiijooyinka Google:
Hadda macaamiisha mustaqbalka waxay soo jiidan karaan khariidadan oo ay si sax ah u arki karaan waxa dhow. Macluumaadka intaa ka badan ee aad bixisid - iyo kolba markaad sii kordho, dib u eegista iyo feejignaanta badan ee aad heshaa ayaa si aad ah caan kuugu ah liiskaaga.
Xulashada xigta waxay kuu oggolaaneysaa inaad u sheegto Google haddii aad macaamiil ugu adeegto meel ka baxsan lebenkaaga iyo hoobiyehaaga. Haddii aad maamusho makhaayad wax geynaysa ama ganacsi dhisme oo u adeega gobolka, waxaad u baahan doontaa inaad ku doorato Haa halkan. Maaddaama tusaalahan, aan kaliya sameyneyno dukaan fudud, waxaan dooran doonnaa maya. Laakiin haddii ganacsiyadaadu u adeegaan macaamiisha wixii ka baxsan afartaada darbi, waxaan ku soo noqon doonnaa tan oo waxaan ku tusi doonaa waxaad sameyn lahayd.
La xiriir Macluumaadka iyo Websaydhada
Macaamiisha suurtogalka ah waxay rabi doonaan inay kula soo xiriiraan. Shaashadda xigta, waxaa lagaa codsan doonaa inaad siiso xoogaa faahfaahin xiriir ah: lambarka taleefankaaga iyo websaydhkaaga. Haddii aadan haysan websaydh buuxa oo dhammaystiran, waxaad tixgelin kartaa inaad ku darto xiriiriye wax sida bogga Facebook halkan.
Google sidoo kale waxay kaa caawin kartaa inaad horumariso degel internet ah. Sol Azteca, oo ku taal South Broadway ee Dutchtown, ayaa dooratay ikhtiyaarkan. Fiiri bogga Google ee Sol Azteca si aad fikrad uga hesho fursadaha. Waxaan ka wada hadli doonnaa sameynta degel websaydhka ganacsigaaga ah hagaha mustaqbalka.
Waxaad dhammeeysaa aasaaskaaga! Google ayaa ku weydiin doonta haddii aad rabto inaad "ku sii socoto aqoonta" - taasi macnaheedu waa waxaad ka heli doontaa emayl ku saabsan sida meheraddaadu ugu socoto Google, oo lagu daray talo soo jeedin ku saabsan sida loo hagaajiyo astaantaada. Haddii aadan dhib ka qabin inaad dhowr emayl oo dheeri ah hesho bishii, ma ahan fikrad xun inaad gujiso xulashadan.
Oo hadda waxaad ku qoran tahay! Laakiin taasi waa talaabada koowaad ee helitaanka meheraddaada Google My Business. In kasta oo aad tan ugu dhowaan karto sidii hawl hal mar ah, waxaan kugula talineynaa inaad isha ku hayso astaantaada Google si aad liistadaada u cusboonaysiiso uguna mashquuliso. Waxaan ku tusi doonaa sida loo maareeyo astaantaada guud boggan.
Maareynta Macluumaadkaaga Ganacsiga Google
Sidii aan kor ku soo sheegnay, maareynta astaantaada Google My Business waa shaqo socota. In kasta oo aan fahamsanahay in milkiilayaasha meheradaha yaryar ay haddaba mashquul yihiin, haddana xaqiiqdii way mudan tahay in daqiiqado dheeraad ah la qaato hadda iyo mustaqbalka si loo maareeyo astaantaada. Mar labaad, sidan ayaa dadku hadda ku helaan.
Markaad dhamaysato tillaabooyinka kor ku xusan si aad naftaada ugu qorto Google, waxaa lagaa codsan doonaa inaad bixiso macluumaad dheeri ah oo dheeraad ah si looga caawiyo horumarinta astaantaada. Waxaad had iyo jeer ka heli kartaa faahfaahintaan dashboardkaaga Google My Business. Laakiin maadaama aan horeyba halkan u nimid, aan ku darno xoogaa taabasho dheeri ah si aan astaantaadu u muuqato. Faahfaahin dhammaystiran ayaa macaamiisha tusaysa aragti guud oo ku saabsan meheraddaada.
Qor Saacadahaaga Ganacsi
Haddii aad ku shaqeyneyso goob leben iyo hoobiye ah (ama haddii aadan rabin macaamiisha inay ku soo wiciyaan waqtiyada oo dhan maalintii), waad geli kartaa saacadahaaga ganacsiga. Dukaanka Cunnada fudud ee Koonfurta ayaa leh saacado xadidan maadaama aan si kale mashquul ugu nahay DutchtownSTL.org deriskeenna ilaa taariikhda. Waad ku dari kartaa ama beddeli kartaa saacadahaaga haddii loo baahdo.
Markaad ku darto saacadahaaga, Google waxay awood u yeelan doontaa inay u sheegto macaamiishaada haddii meheraddaadu xilligan furan tahay ama xidhan tahay, iyo goorta aad fureyso xiga. Xitaa waxay ku siin doontaa talooyin waxtar leh oo aad "dhaqso u furayso" marka ay soo dhowaato bilowga maalintaada ganacsi.
Marka xigta, waxaad ubaahantahay inaad sharaxaad ka bixiso ganacsigaaga. Waad sii koobi kartaa, laakiin Google waxay kugula talineysaa inaad isticmaasho dhamaan 750 xaraf oo ay ku siinayaan. Tani waa bar wanaagsan oo aad kuheli karto waxyaabaha aad qabato. Tusaale ahaan, kaliya ha oran makhaayad ayaad leedahay — wax badan u sheeg:
Cuntada Dutchtown waxay u adeegtaa cunnooyinka caadiga ah ee Mareykanka oo leh leexin, oo ay ku jiraan burgers, sandwiches, iyo saladh. Waxaan caan ku nahay naadigayaga Triple Turkey Club, laakiin sidoo kale waxaan soo bandhignay xulasho weyn oo burgers, dhalaalaya, iyo duubid oo ay weheliyaan dhinacyada dhaqanka aad ugu jeceshahay iyo waxyaabaha gaarka ah ee aadan meel kale ka heli doonin!
Waxaan bixinaa maalin walba waxyaabo gaar ah oo ay ka mid yihiin suxuunta sida hilibka hilibka doofaarka, digaagga doofaarka, iyo digaaggayada duban ee caanka ah. Waxaan sidoo kale sameynnaa quraac la kariyey oo la dalbado iyo qado gaar ah oo lagu soo bandhigo sandwicheskeena macaan, maraqa, iyo saladhyada.
Waxaan hiigsaneynaa inaan ka farxino macmiil kasta ha doortaan inay wax ka cunaan, inay u qaataan, ama cashadooda la gaarsiiyo. Iskuday Dutchtown Diner maanta!
Marka lagu daro macluumaad gaar ah oo gaar ah waxay ka caawineysaa google inuu si fiican kuu barto. Macaamiishaada suurtogalka ahi ma raadin karaan kaliya "makhaayad" - waxay u badan tahay inay galeen wax gaar ah, sida "dukaan sandwich ah oo ku yaal Dutchtown" ama "burgers igu dhow." Hubso inay ku heli karaan adiga oo ku daraya noocyada ereyada muhiimka ah.
Rhonda's Resale Shop wuxuu xambaarsan yahay xulasho taxaddar leh oo dharka dumarka ah, oo ay ku jiraan dharka, jooniska, funaanadaha, iyo dahabka loogu talagalay haweenka nooc kasta, cabirro, iyo qaabab kala duwan.
Haddii aad raadineyso dhar dhan oo habeen ah oo magaalada ah, ama qaybta qurxinta ee ugu fiican ee lagu kabo isuduwahaaga, Rhonda's Resale Shop wuxuu leeyahay xulasho gaar ah oo xaddidan oo hubaal ah inuu wax kugu daro. Waxaan si joogto ah u helaynaa alaab cusub, markaa hubi inaad inta badan na soo booqato dhammaan moodooyinka ugu dambeeyay iyo waxyaabaha cusub ee la helay.
Waxaan wax u helnay qaab kasta iyo xilli kasta. Kaalay booqo Rhonda's fasalada caadiga ah, dharka ganacsiga ee xirfada leh, iyo dharka fiidkii ee cajiibka ah.
Gonzalez Qandaraasle waa qandaraasle dhisme adeeg buuxa oo ku takhasusay shaqada guryaha duugga ah ee quruxda badan ee St. Waxaan ka shaqeyneynaa shaqooyinka dhismaha ee dhammaan noocyada, min dayactir yar ilaa dib u habeyn buuxda.
Khibradayada dib u soo celinta taariikhiga ah iyo dayactirka waxay ku darsaneysaa qurux iyo dhalaal gurigaaga taariikhiga ah. Naga soo wac dhammaan baahiyahaaga isku-xidhka iyo shaqada lebenka. Waxaan sidoo kale dayactirnaa, soo celinaa, ama rakibnaa xubno dhismeed qurxan iyo daaqado taariikhi ah sida ku cad xeerarka dhismaha ee taariikhiga ah.
Intaa waxaa sii dheer, waxaan kaa caawin karnaa deyrkaaga ama qorshooyinka sagxadda, jikadaada ama hagaajinta musqusha, ama mashaariic kale oo badan oo guriga dhexdiisa ah. Nala soo xiriir maanta qiimeyn bilaash ah iyo gudbin.
Haddii aad runtii rabto inaad qabato indhaha macaamiishaada mustaqbalka, hubi inaad ku darto sawirro qaar ka mid ah astaantaada. Sawirradu waxay muujinayaan badeecadaada iyo adeegyadu inay ka fiican yihiin ereyada, waxayna aad ugu mashquulsan yihiin macaamiisha mustaqbalka.
Isku day inaad ka dhigto sawiradaada mid xiiso leh iyo mid sasabasho leh. Haddii aadan aheyn sawir qaadaha ugufiican, tixgeli inaad weydiso saaxiib ama xubin qoyskaaga ah oo laga yaabo inuu awoodo inuu soo jiito tallaal soo jiidasho leh.
Kudar sawirro badan intaad jeceshahay. Fikradaha qaarkood:
Makhaayadaha: qolkaaga cuntada (ha ahaado mid madhan ama inta lagu jiro rush), adiga ama kuugga ka shaqeeya jikadaada nadiifka ah oo abaabulan, suxuunta si taxaddar leh loo xiiray, ama adeegeyaasha miiska u qaadanaya cuntada.
Dukaammada: adiga ama shaqaalahaaga oo caawinaya macaamiisha (hubi in macaamiisha ay caadi ku yihiin inaad qaadato oo aad isticmaasho sawirkooda), badeecada ugu cusub, ama gudaha dukaankaaga oo muujinaya xulashadaada ballaaran iyo dukaanka si wanaagsan loo dayactiray.
Adeegyada: Adiga ama shaqaalahaaga oo lashaqeynaya macaamiisha, horuumarinta iyo mashaariicda dhammaaday ee muujinaya tayada shaqadaada sare, ama aad hor taagan tahay meheraddaada.
Oo ay ku jiraan sawirrada naftaada, shaqaalahaaga, iyo macaamiishaada ayaa kaa caawin kara soo jiidashada macaamiisha suurtagalka ah adiga oo wejiyada ku xiraya ganacsigaaga. Hubso inaad hesho oggolaanshaha qof kasta oo ka muuqda sawirrada aad ku dhejiso internetka.
Waxaad dhammaystirtay astaantaada ganacsiga 'Google My Business'! Hada adigaa gacanta ku haya waxa dadku arkaan markay meheradaadu ka muuqato Google. Waad ka bixi kartaa kombuyuutarka hadda, laakiin markale, waxaan si adag kugula talineynaa inaad iska hubiso Dashboard -ka Google My Business waqti ka waqti. Tag ganacsi.google.com si aad uhesho shaashaddaada. Sii wad inaad ku darto sawirro cusub, hubi in saacadahaaga iyo macluumaadkaagu ay yihiin kuwo cusub, oo ka jawaab dib-u-eegista.
The qaybta labaad ee Hagahayaga Dutchtown ee Google My Business hadda waa nool yahay! Ku sii wad astaamaha horumarsan, macaamiishana ku mashquul kuna cusboonaysii waxyaabaha cusub.
DutchtownSTL iyo annaga Guddiyada Dutchtown sii wadi doonta soo saarista hagitaano iyo uruurinta ilaha ka caawiya xaafadahayaga ganacsiyada yaryar inay guuleystaan. Ka raadi ilo dheeraad ah dutchtownstl.org/business, iska qor liiska boostada ee DutchtownSTL, oo na daba soco Facebook, Twitter, Iyo Instagram dhammaan wixii ugu dambeeyay ee aan bixinno! Haddii aad hayso fikrado ku saabsan sida aan u taageeri karno ganacsiyada Dutchtown, xor ayaad u tahay nala soo xiriir.
La wadaag boggan Facebook, Twitter, ama maraya Email. Boggan waxaa markii ugu dambeysay la cusbooneysiiyay February 11th, 2021 .
DutchtownSTL.org Taageerida Ganacsiyadeena Dutchtown Google My Business: Hagaha Dutchtown ee Liistada